Waa maxay sababta Harry Potter iyo Sayidka giraanta ay wali noo qabsadeen 20 sano ka dib - 【Comparison】 2022
Waa maxay sababta Harry Potter iyo Lord of the Rings ay wali noo soo jiitaan 20 sano ka dib
Waxaa qoray: 39 (Periscopi)
Santos Torres, Daryeel (Qoraa)
Waa inuu jiraa xoogaa sixir hawada ku jira. Bishii Nofeembar iyo Disembar 2001, laba filim oo cajiib ah ayaa soo bandhigay sixir awood leh oo ay u beddeleen Hollywood weligood.
Labaduba waxay ku salaysan yihiin sheeko-xariiro taxane ah, mid ku dhawaad ​​nus qarni jiray, kan kalena aan weli la dhammaystirin, waxayna noqdeen labada filim ee ugu muhiimsan taariikhda. Dib-u-eegis, waxa si adag loo odhan karaa muddadaas, 20 sano ka hor, waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee shaleemada qarnigii XNUMXaad.
Labaatan sano ka dib markii la sii daayay asalka, Harry Potter iyo Lord of the Rings filimada ayaa si aad ah ugu dhex jira kaydka wadajirka ah ee dhaqanka pop, qaar badan, aragtida ugu dambeysa ee sheekooyinka, oo u muuqda inay yihiin caddaynta ugu dambeysa. Ka dib oo dhan, Tolkien's Tales waxay muddo dheer ahayd tusaalaha la aqbalay ee khiyaali-xumada, halka JK Rowling's Wizarding World uu ku socday waddada si uu u noqdo taxanaha buugaagta ugu guulaha badan wakhti kasta.
Laakin u leexi Time Turner kaaga horraanta qarniga XNUMXaad, Harry Potter iyo dhagaxa falsafada (dhagaxa falsafada ee UK) iyo wehelnimada giraanta ayaa aad uga khatar badnaa.
Fantasy marar dhif ah ayay qaseen xafiiska sanduuqa 1990-meeyadii. Siddeetameeyadii seef iyo sixirkii la sii daayay sida Krull, Dragonslayer, Beastmaster iyo Ladyhawke waxay ahaayeen xasuus fog. Dhanka kale, Ghost, Dareenka Lixaad, Aladdin iyo Beauty iyo Beast ayaa ahaa wakiilada kaliya ee nooc ka sareeya ee ka mid ah 50-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyay tobanka sano. Waagii ganacsigu weli si dhab ah uma bilaaban, markaa tani waxay ahayd markii filimadii asalka ahaa ay weli xukunka sii hayn karaan - isla 50-kii ugu sarreeyay 90-kii waxay leeyihiin 10 taxane, saddex ka mid ahna filimaan.
Ciyaar ciyaarta dheer
Ma ka maqashay Ceelka, Duufaanta iyo Ragga? (Sawirka: Cinema New Line / Filimyada WingNut)
Laakiin Potter iyo Lord of the rings waxay ahayd inay noqdaan franchises. U yeerida maalin kadib laqabsiga buugaagtii ugu horeysay ma ahayn ikhtiyaar halis ah, maadaama aan waligood loo maleyneynin inay sheegaan sheeko buuxda.
Dhagaxa Sixiroolaha iyo Xidhiidhka Xalqada midna ma ahayn filimadii ugu horreeyay ee ka taga sheeko aan la xallin; Dhab ahaantii, Ralph Bakshi's 1978 la qabsiga dhaqdhaqaaqa leh ee Lord of the rings wuxuu ku dhammaaday kala badh. Daah-furka ayaa ahaa tallaabo dhiirran oo cajiib ah. George Lucas waxa uu awooday oo kaliya in uu dhammeeyo The Empire Strikes Back in shaki ka dib markii ugu horeysay ee Star Wars ay mar hore jabiyeen rikoorada xafiiska. Xitaa blockbusters-yada ugu weyn ee nooca 90-meeyadii (Jurassic Park, Men In Black, Maalinta Madaxbanaanida) ayaa markii hore iskood u abuuray, iyada oo dabagalkooda xiga ay raacayaan hitskooda.
Si kastaba ha ahaatee, Harry Potter iyo Lord of the Rings, istuudiyooyinkeeda wax soo saarka (Warner Bros. iyo Cinema New Line) ayaa ciyaaray ciyaarta dheer laga bilaabo maalinta koowaad. Filimkii labaad ee Potter-ka ayaa kamaradaha hor taagnaa maalmo ka dib markii ugu horeysay ee tiyaatarada la soo dego, halka Sayidka Rings uu ahaa mid hami badan leh. Agaasime Peter Jackson ayaa loo ogolaaday in uu saddexda filim ee trilogy midba midka kale ku toogto New Zealand; Marka la eego, tallaabo caqli-gal ah oo lagu badbaadinayo lacagta, laakiin waxay ahaan lahayd masiibo dhaqaale haddii Fellowship of the Ring uu ku guuldareysto.
Si degdeg ah maanta iyo Christopher Nolan ayaa la odhan karaa waa director kaliya ee sameeya filimada blockbuster ee aan lahayn "franchise" maskaxda ku hayaan. Potter, gaar ahaan, wuxuu muujiyay in taageerayaashu ay si farxad leh ula qabsan lahaayeen sheeko laga sheegay siddeed filim tobankii sano ee la soo dhaafay. Dhab ahaantii, waxaan aad ugu fogaan lahayn in aan niraahno korriinka aan dhammaadka lahayn ee Marvel Cinematic Universe laga yaabo in uusan u ekaan doorasho macquul ah haddii aysan ahayn Wizard Wiilku inuu tijaabiyo dhulka marka hore.
Tani 2001 double whammy sidoo kale waxay badashay xikmaddii la aqbalay ee ahayd in marka kaliya ee la sii daayo blockbuster ay ahayd bilaha xagaaga. Dayrta iyo jiilaalku waxay noqdeen goobta ugu weyn ee lagu dagaalamo sanduuqa, iyada oo isku xidhka ka hor Christmas-ka ee Fellowship of the Rings hadda aad loo jecel yahay in uu martigeliyo Avatar, Aquaman iyo afar filim oo Star Wars ah. Oo waxaan arki lahayn shirkado fara badan oo ka soo baxaya filimada sannad ka dib, arag sidoo kale Matrix, Star Wars, iyo Avengers, haddii Harry Potter iyo Lord of the Rings aysan muujin in istiraatiijiyadu ay keeni karto natiijooyin faa'iido leh. Natiijooyinka.? Ma aha in madaxeena.
Arrin waqti ah
Frodo iyo Sam waxay gacan ka geysteen beddelka habka adduunku u arko khiyaaliga. (Sawirka: Warner Bros.)
Haddii ay jirto hal hubaal oo Hollywood ah, waa in aanay wakhti dheer qaadan doonin ka hor inta aan istuudiyaha xafiiltami bilaabin waxa weyn ee soo socda. Oo sidaas daraaddeed, isla markii filimadii ugu horreeyay ay noqdeen hits weyn, raadinta Harry Potter soo socda iyo Lord of the Rings ayaa bilaabmay.
Laqabsiga buugaagta da'da yar ee qaangaarka ah (YA) ayaa si dhakhso ah u qabsaday: Ciyaaraha Gaajada iyo Twilight waxay ahaayeen hits, Compass Golden iyo The Mortal Instrument Minus, halka khiyaaliyada xiisaha leh ay aakhirkii noqotay wax caadi ah. Aad bay u adag tahay in HBO ay bilaabi lahayd Game of Thrones la'aanteed filimada Jackson ee dhulka Dhexe, iyo Westeros la'aanteed, ma jiri doonto Netflix's The Witcher ama Amazon's Wheel of Time. Si kastaba ha ahaatee, in mid ka mid ah isku-yeeleyaasha Potter-ka ama Giraanta ay si isku mid ah u qabteen zeitgeist-ka ayaa weli ah mid la is-weydiin karo.
Shaki kuma jiro in taxanaha Harry Potter iyo Lord of the Rings ay si fiican ugu soo beegmeen si ay uga faa'iidaystaan ​​horumarka tignoolajiyada. Marka laga soo tago caawinta shidaalka kobaca DVD-ga (Lord of the Rings daabacadaha la dheereeyay waxay si deg deg ah u ekaayeen sii daynta saxda ah), waxay ahaayeen taxane muhiim ah oo riixaya xuduudaha saamaynta muuqaalka.
Marka laga reebo dhowr sawir oo duff ah oo ku yaal Stone Sorcerer's Stone, labada shirkadoodba waxay ka faa'iideysteen awoodda tignoolajiyada, maadaama saameyntu ay si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmeen ficilka tooska ah ee aan ilownay inaysan runtii halkaas joogin. Oo haddii Jar Jar Binks aadka loo xumay uu ahaa safka hore ee jilayaasha dhijitaalka ah, waxay ahayd Gollum, oo lagu qabtay jilitaanka, oo qof walba ka dhigay inuu fadhiisto oo fiiro gaar ah u yeesho, qofna ma hubo in quruxda Andy Serkis ay tahay in lagu xuso sheekooyinka. wada sheekeysiga abaal marinta ama maya. Labaatan sano ka dib, jilayaasha waaweyn ee ku dhuumanaya gadaasha wejiga dhijitaalka ah waa wax caadi ah.
Laakiin waxaa laga yaabaa in dhaxalka ugu weyn ee labada shirkadood ay tahay sida ay u beddeleen fikradaha adduunka khiyaaliga ah - runtii, waxay u keeneen sheekooyin hal abuur leh oo geesinimo iyo sixir daawadayaasha caadiga ah. Labada sagaashaba waxaa loo sameeyay ixtiraam buuxa oo loogu talagalay agabka isha, sida soo saaraha Potter David Heyman iyo agaasimaha dhulka dhexe Peter Jackson ayaa kormeeray xayndaabkooda iyagoo jacayl qaawan u qabo adduunyada ay abuurayaan.
Waa hab lagu sii hayo (inta badan) taageereyaasha wakhtiga oo dhan, oo hadda si fiican ugu adeega Marvel liiskooda Wajiga 4, Star Trek, iyo shirkado kale oo badan. Taageerayaasha daacadda ah ayaa hadda ka sheekeynaya sheekooyinka ugu waaweyn shaashadda, iyo filimada nooca iyo TV-ga ayaa ku horumaray taas.
Harry Potter iyo Lord of the Rings ayaa diyaar u ah inay ka sii daadan HBO Max gudaha Maraykanka iyo Amazon Prime ee UK. Sannad-guuradii 20-aad ee Harry Potter: Ku soo noqo bandhigga Hogwarts ee HBO Max maalinta Sannadaha Cusub.